Fepetran-tserivisy - Singles Grace Singles
Alohan'ny hidiranao ao amin'ny Singles Grace Singles dia angatahinay ianao handinika ireto fanambarana sy fepetra manaraka ireto. Amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty "Manaiky ny fepetra sy ny fepetra" aho ary miditra amin'ny SGS, dia manamafy ianao fa mahatakatra ireo fehezanteny etsy ambany.
-Miaiky ny handefa sarin'ny tenako mampiseho ny tavako aho.
-Miaiky ny hamaly ny fanontaniako momba ny mombamomba ahy aho, anisan'izany ireo izay mitaky valiny voatonta na "essay". NAOTY: Atao hiantohana izany Mpikambana SGS afaka mifankahalala fa tsy mamorona kaonty tsy milaza na inona na inona momba ny tenany fotsiny.
- Tsy hampidiriko ao amin'ny mombamomba ahy ny adiresy mailaka, ny chat na ny messenger (Viber, Skype, AOL Messenger, Yahoo, MSN, sns.), Adiresy Internet na rohy mankamin'ny tranonkala hafa, nomeraon-telefaona, adiresy an-dàlana, anarana farany, na fampahalalana momba ny fifandraisana hafa.
Ity serivisy ity dia natao ho an'ireo tsy latsaky ny 18 taona.
Ny serivisy SovereignGraceSingles.com (etsy ambany hoe "SGS") dia fomba iray hihaonan'ireo olon-dehibe tsy miovaova (na mbola tsy nanambady aza izy ireo, na nisara-panambadiana na maty vady) hihaona amin'ny olon-dehibe mpitovo (na mbola tsy nanambady, nisara-bady na maty vady) an-tserasera. SGS dia natolotry ny Souler Grace Enterprises LLC, manao raharaham-barotra amin'ny maha SoulerGraceSingles.com, miaraka amin'ny adiresy mailaka an'ny PO Box 355, Toledo, WA 98591 USA. Ity dia fifanarahana ara-dalàna ("Fifanarahana") eo aminao sy SGS. Azafady mba vakio tsara ny fifanarahana alohan'ny hisoratana anarana amin'ny serivisy SGS.
By misoratra anarana amin'ny SGS, lasa mpikambana ao amin'ny Serivisy ("mpikambana") ianao, ary manaiky ny hofehezin'ny fepetra sy fanjavan'ity fifanarahana ity (ny "Terms") raha mbola mpikambana hatrany ianao. RAHA TSY MANAIKY NY DINDRINDRA IANAO, AZA MBA REGISTER NY SERVICE SOVEREIGNGRACESINGLES.COM. NY FANONTANIANA AZON'NY FANOVAN'NY SOVEREIGNGRACESINGLES.COM NA INDRINDRA. Ny fisoratana anarana dia fanekena mazava ireo teny ao. NY Fampiasanao ny serivisy dia mitohy ny fahazoanao ny fiovana. ANDRAIKITRA ANDRIAMANITRAO ny mijery ity fifanarahana ity ary miatrika ny fanovana ataonao. Amin'ny fahatongavana ho mpikambana dia manaiky ny handefa mailaka avy amin'ny SGS na amin'ny alàlan'ny SGS. Ireo mailaka ireo dia mifandraika amin'ny fampiasanao ny SGS sy amin'ny serivisy omena na amin'ny alàlan'ny SGS.
Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fandefasana fangatahana aminay ao amin'ny admin@soightygracesingles.com.
TSY AZO ATAO Mpikambana ny zaza tsy ampy taona.
Rehefa misoratra anarana ianao ary indraindray dia aorian'izay dia mety mitaky ny hanomezanao fampahalalana ampy ny SGS hanondroana fa 18 taona farafahakeliny ianao. Amin'ny fahatongavana ho mpikambana dia misolo tena sy manome antoka ianao fa 18 taona farafahakeliny. Na ianao na SGS dia mety manafoana ny maha-mpikambana anao SGS amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona antony, mahomby amin'ny fandefasana fampandrenesana an-tsoratra an-tariby amin'ny antoko hafa. SGS dia manana zo hampiato avy hatrany na hampiato ny fidiranao amin'ny serivisy SGS, tsy misy fampandrenesana mialoha, raha misy fandikana ity fifanarahana ity nataonao izay tonga teo am-pelatanan'ny SGS. Raha sendra naato ny fidiranao amin'ny serivisy SGS na misy fanitsakitsahana izany fifanarahana nataonao izany dia tsy hahazo alalana amin'ny famerenam-bola ianao raha misy sarany maha mpikambana anao. Ny maha-mpikambana anao amin'ny serivisy SGS dia ho anao irery ihany. Tsy azonao atao ny manome alalana ny hafa hampiasa ny maha-mpikambana anao, ary mety tsy hanome na hamindra ny kaontinao amin'ny olon-kafa na orinasa hafa ianao.
Tanjona amin'ny serivisy.
Ny SGS dia tranonkala iray sy asa fanompoana nohavaozina manompo ny tsenan'ny Kristiana nohavaozina, miorina amin'ny finoana sy fampianarana ara-Baiboly sy nohavaozina. Natao ho an'ny lehilahy tokan-tena izany hifandraisany amin'ny vehivavy mpitovo, ary ny mifamadika amin'izany, ho an'ny fifandraisana am-pitiavana irery, miaraka amin'ny tanjona ny fanambadiana. Irina ihany koa ny hanompo ireo Mpikambana SGS ho toerana hihaonana amin'ireo tokan-tena nohavaozina ho an'ny finamanana, fialamboly, hetsika, hetsika, fihaonambe ary serivisy. Amin'ny maha-finoana, fotopampianarana ary fomba fanao ara-pivavahana, SGS dia miaro ny teny hoe fanambadiana ho an'ny fifandraisana misy eo amin'ny lehilahy iray (vady) sy vehivavy iray (vady) ka hatramin'ny fanilihana ny hafa rehetra, araka ny nanendren'Andriamanitra azy. Io no fifandraisana akaiky indrindra amin'ny zanak'olombelona, ​​fanomezana avy amin'Andriamanitra, andrim-panjakana masina, masina ary ivon'ny fiarahamonina misy ny finoana. Io fifandraisana amin'ny fifanekena io dia maneho koa ny firaisana eo amin'i Kristy sy ny Vatany (ny fiangonana). Genesisy 2: 18-24; Matio 19: 5-6; Marka 10: 7-8; Efesiana 5: 22-33; Kolosiana 3: 18-19; 1 Petera 3: 1-7; Heb. 13: 4. Na dia natao ho an'ny lehilahy mpitovo Kristiana nohavaozina aza ny SGS hifandraisany amin'ireo vehivavy mpitovo Kristiana, ary ny mifamadika amin'izany, na iza na iza tsy manambady amin'izao fotoana izao (izany hoe tsy manambady ara-dalàna) na avy aiza na avy aiza, dia avela handray anjara. Na izany aza, raha jerena ny tanjontsika, araka ny voalaza etsy ambony, ary ny maha mpikambana ao aminay ireo mpitovo namboarina nohavaozina, ny olona ivelan'ity tsena ity dia hahita fa sarotra ny mifandray amin'ny olona mety amin'izy ireo amin'ny serivisy.
Fepetra sy fepetra amin'ny serivisy sy ny fitondran-tena an-tserasera.
Amin'ny maha-mpikambana anao dia manaiky ianao:
• Zon'ny SGS ny hampiato avy hatrany na hampiato ny fidiranao amin'ny serivisy SGS, nefa tsy misy fampandrenesana mialoha, raha misy ny fandikana ity fifanarahana ity izay natrehin'i SGS. Raha sanatria mihantona na tapitra ny fidiranao amin'ny serivisy SGS amin'ny fandikana ity fifanarahana ity izay naseho teo am-pelatanan'ny SGS, dia tsy hahazo alalana amin'ny volanao ianao raha averina ny saram-pandraisana anjara.
• Ny maha-mpikambana anao amin'ny serivisy SGS dia ho an'ny fampiasanao manokana. Tsy azonao atao ny manome alalana ny hafa hampiasa ny maha-mpikambana anao, ary mety tsy hanome na hamindra ny kaontinao amin'ny olon-kafa na orinasa hafa ianao.
• Tompon'andraikitra amin'ny atiny na fampahalalana navoakanao na asehoo (eto ambany izao, ny "paositra") amin'ny serivisy SGS, na ampitao amin'ireo mpikambana SGS hafa.
• Tsy handefa serivisy amin'ny serivisy SGS ianao, na handefa amin'ireo mpikambana na mpiasa SGS hafa, izay manala baraka, tsy marina, manararaotra, mamoafady, maloto fitondran-tena, manambana, manenjika, manafintohina ara-pirazanana, na fitaovana tsy ara-dalàna, na fitaovana manimba na manitsakitsaka zon'ny antoko hafa (ao anatin'izany, saingy tsy ferana amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina, sy ny zon'ny fiainana manokana sy ny fanaovana dokambarotra).
• Hampiasa ny serivisy SGS amin'ny fomba mifanaraka amin'ny lalàna sy lalàna mifandraika amin'izany ianao.
• Tsy hampidirinao ao amin'ny piraofilinao ny adiresy mailaka, ny chat na ny messenger (Viber, Skype, AOL Messenger, Yahoo, MSN, sns.), Adiresy Internet na rohy mankamin'ny tranonkala hafa, nomeraon-telefaona, adiresy an-dàlana, anarana farany, na fampahalalana momba ny fifandraisana hafa; fanondroana anatomika na firaisana ara-nofo manafintohina, na fiteny mampihetsi-po na firaisana ara-nofo manafintohina, ary tsy handefa sary misy fitanjahana na mombamomba anao manokana ianao. Tsy ampidirinao ao amin'ny faritra nosafidinao na nosafidinao maro tamin'ny piraofilinao ny sary, ny rakitra video na ny rakitra mozika. Manana zo hanala izay zavatra heveriny ho tsy mety i SGS, araka ny itiavany azy. Manana ny zony ny SGS, saingy tsy manana adidy, handà izay mombamomba na sary tsy mifanaraka amin'ireo fandrarana ireo.
• Tsy hampiditra adiresy mailaka ianao; Laharana Skype na tahony; na tarehimarika na tahony mpitondra hafatra; na laharana Chat hafa na fikirakirana ao amin'ny hafatrao ho an'ny mpikambana SGS hafa, raha tsy mpikambana ao amin'ny SGS ianao.
• Tsy hamorona profil maro ianao, raha tsy avelan'ny SGS Staff an-tsoratra.
• Tsy hanao doka amin'ny, na fangatahana mpikambana hafa hividy na hivarotra vokatra na serivisy amin'ny alàlan'ny serivisy ianao. Tsy handefa taratasy misy rojo vy na mailaka junk amin'ireo mpikambana SGS hafa ianao.
• Tsy handefa, hizara na hamerina amin'ny fomba hafa na inona na inona fitaovana misy zon'ny mpamorona, mari-pamantarana, na mombamomba anao hafa ianao raha tsy mahazo ny faneken'ny tompona ny zon'ny tompona toy izany.
• Tompon'andraikitra amin'ny fifandraisanareo amin'ny mpikambana SGS hafa ianao. Manana ny zony ny SGS, saingy tsy manana adidy, ny manara-maso kaonty izay mandika ny fitsipi-pitondrantena ary manara-maso ny fifanolanana misy eo aminao sy ireo mpikambana hafa.
• Tsy handefa vola mihitsy ianao, na hangataka vola amin'ireo, mpikambana SGS hafa, amin'ny antony rehetra.
• Ny fampiasanao ny SGS dia tsy maintsy atao ho an'ny fikatsahana fifandraisan-doha, mba hihazonana ny fahamendrehan'ny Serivisy. Ohatra, mety tsy ho mpikambana ianao mba hanangonana tatitra momba ny olon-tokana mifanentana ao amin'ny faritra misy anao, na hanoratra lahatsoratra na hanao fikarohana amin'ny tsena. Hodinihinay isaky ny tranga ny fangatahana nataon'ny mpanao gazety, nalefa tany aminay mandroso amin'ny alàlan'ny mailaka. Rehefa mahazo fahazoan-dàlana an-tsoratra avy aminay ianao vao afaka miroso ary manaraka ny fepetra rehetra napetrakay.
• Tsy hampiroborobo ny serivisy sy / na serivisy fanaovana lalao ho an'ny mpikamanao amin'ny fomba rehetra ianao.
INDEMNITE BY MEMBER.
Hiaro, handoa onitra ary hihazona ny SGS tsy mampidi-doza ianao, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpiasa, ny mpanohana ary ny mpanao dokam-barotra, ny maso ivoho, ny orinasa sy / na ny mpiara-miombon'antoka, ary ny antoko fahatelo, ho an'ny fatiantoka, fandaniana, trosa ary fandaniam-bola (ao anatin'izany ny saram-pisian'ny mpisolovava mirary ) mifandraika amin'ny na mipoitra avy amin'ny fampiasanao ny serivisy SGS, ao anatin'izany ny fanitsakitsahana anao ny fe-potoan'ity fifanarahana ity.
Ny hevitra, torohevitra, fanambarana, tolotra, na fampahalalana na atiny hafa natolotra tamin'ny alàlan'ny serivisy SGS dia an'ny an'ny mpanoratra azy ireo fa tsy an'ny SGS, ary tsy tokony hiantehitra amin'izany. Ny mpanoratra toy izany no tompon'andraikitra amin'ny atiny toy izany. SOVEREIGNGRACESINGLES.COM dia TSY manome antoka ny fahatongavana, ny fahafenoana, na ny fampiasana ny fampahalalana rehetra momba ny serivisy ary na dia ny ADORAN'NY NAORIN'NY FANORENANA AZA AZA AZA ATAO AZA ATAON'NY FITSIPIKA NA NY FITORIANA REHETRA, na torohevitra, na torohevitra. TSY MISY CIRCUMSTANCES TSY MISY HITSANGARANA.COM HETRAKA NY FAHAMARINANA NA NY RATSY ATAHORANA AVY AMIN'NY FIAINAN'OLONY AMIN'NY FOMBA FAMPIANARANA AMIN'NY FOMBA AMIN'NY MPITONDRA FIOMPIANA.COM, NA TRANSMITTES.
FAMPITANDREMANA - MBA VAKIO IZAO:
Mety misy ny mpikambana SGS na mpampiasa hafa (ao anatin'izany ireo mpampiasa tsy nahazoana alàlana, na "hackers") dia mety mandefa na mandefa fitaovana manafintohina na vetaveta amin'ny serivisy SGS ary mety hiharan'ny herisetra sy fahalotoana toy izany ianao. Azo atao ho an'ny hafa koa ny mahazo fampahalalana momba anao noho ny fampiasanao ny serivisy, ary mety hampiasain'ny mpandray izany fampahalalana izany hanelingelina anao na handratra anao. SGS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana fampahalalana momba anao manokana izay azonao safidiana hambara amin'ny serivisy. Azafady mba safidio tsara ny karazana fampahalalana alefanao amin'ny serivisy SGS na avoakao amin'ny hafa. AZO NOHO NY FANAMPINY IZAO FA RAHA MITONDRA FIVORIANA AN'OLONY, NA FIVORIANA AN'OLOMBELO, AMIN'NY OLON'OLONA, NA OLONA, NANARAKA AMIN'NY NA MET, mivantana, na an-kolaka, vokatry ny serivisy, IZAY SGS dia manohana fa tsy misy fitakiana inona na inona. , MITADIAVA ANAO NA IZAY AZONAO FITIAVANA, ara-batana, na ara-pihetseham-po na amin'ny fomba hafa, mandritra ny fihaonamben'ny olona toa izany eo am-pelatanan'ny olona (S) hitanareo.
SOVEREIGNGRACESINGLES.COM MITANDRINA NY AZONAO, FA TSY MISY ADIDITRA AZA ATAO, MBOLA HITANDRINA NY FITAOVANA APOSTOLY AVY AMIN'NY FITONDRAN'NY SOVEREIGNGRACESINGLES.COM SERVICE.
SOVEREIGNGRACESINGLES.COM dia manana ny zony hanafoana ireo karazan-javatra toy izany izay manimba, na avela hanimba, ny lalàna na ity fifanarahana ity.
TSY MISY INDRINDRA IZAO NY ZON'NY SOVEREIGNGRACESINGLES.COM, MITANDRINA ANAO HETRANDRAIKITRA AMIN'NY LOHATENIN'NY FITAOVANA NATAONAO TAMIN'NY FITONDRAN'NY SERVICE SY NY FITENY MAILBOX PRIVATEO. HAFATRA Nalefa teo anelanelanao sy ireo mpikambana hafa amin'ny fanjakana soavaly.COM VIA NY MAILBOX-nao amin'ny SOVEREIGNGRACESINGLES.COM dia horaisina ho toy ny PRIVATE OF SOVEREIGNGRACESINGLES.COM TO THE EXTENTED Required by APPLICABLE. NA INDRINDRA NA INDRINDRA IZAO NA IZAO NA IZA NA IZA IZAY NAMARITRA NY MAILBOX PRIVATEO AZA AZA ATAO, ATAON'NY MPITSITRAKA NY FITONDRANA.COM HANOLOTRA, NA AZA AZA ATAO HANOLOTRA, NY LALANA NA NY FANEKENA ITY. Esory ny fitaovana mahatafintohina AMIN'NY MAILBOX AZO TSY MISY FAMPANDROSOANA ANAO.
Manaiky ianao fa ny serivisy SGS dia tsy manana adidy aminao na inona na inona hanome anao fidirana amin'ny faritra rehetra amin'ny serivisy SGS, ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny, ny mombamomba anao, ny mailbox anao, na ny faritra hafa amin'ny serivisy SGS, raha tsy manao izany ianao manana fotoana sisa ao amin'ny kaontinao, na fotoana malalaka nomenay anao (amin'ny fahalalànay tanteraka), na ny fotoana andoavanao izay novidinao tamin'ny serivisy SGS. Izany dia tsy misy adidy na inona na inona amin'ny serivisy SGS hanome anao fidirana hitady izay vaovao napetrakao teo amin'ny mombamomba anao na ny mailaka nalefanao mpikambana hafa tao amin'ny boaty mailakao tamin'ny serivisy SGS na izay nandefasan'ny mpikambana hafa ny boaty mailakao tamin'ny serivisy SGS , na fidirana hafa na inona na inona raha tsy manam-potoana sisa ao amin'ny kaontinao ianao handraisanao ny serivisy SGS, na amin'ny fotoana malalaka nomenay anao (amin'ny fahalalànay tanteraka), na amin'ny fotoana nandoavanao ny serivisy SGS. Ny adidy tokana omen'ny serivisy SGS anao, raha tsy maniry hividy fidirana fanampiny amin'ny serivisy SGS ianao, na manapa-kevitra ny serivisy SGS hanome anao fidirana malalaka fanampiny amin'ny serivisy SGS, araka ny fahaizany manokana, dia ny na tahirizo ny mombamomba anao (toy izany fa tsy ho hitan'ny mpikambana hafa mandritra ny fotoana anaovany azy io) mandra-panapahanao hevitra amin'ny famoahana izany na hamafana azy, amin'ny fangatahanao an-tsoratra mazava na hamafana ny mombamomba anao amin'ny serivisy SGS rehefa ny fangatahanao an-tsoratra mazava. SGS dia manana sy mitazona zon'ny tompona hafa amin'ny serivisy SGS. Ny Serivisy dia misy ny fitaovana misy zon'ny mpamorona, mari-pamantarana, ary fampahalalana hafa an'ny SGS sy ireo manana fahazoan-dàlana. Ho fanampin'izay, ny Mpikambana hafa dia mety mandefa fampahalalana miaro ny zon'ny mpamorona, izay miaro ny zon'ny mpamorona na fantatra fa manana zon'ny mpamorona izy na tsia. Afa-tsy ireo fampahalalana izay ao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe na nomena anao fahazoan-dàlana, dia tsy handika, hanova, hamoaka, handefa, hizara, hanao, hampiseho, na hivarotra fampahalalana momba ny fananana toa izany ianao. Amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao na atiny amin'ny faritra ampahibemaso ao SGS, manome anao ho azy ianao, ary misolo tena ary manome alalana anao hanana zony hanome, amin'ny SGS sy ireo mpikambana SGS hafa manana fahazoan-dàlana tsy azo ovaina, maharitra, tsy ankanavaka, karama feno, manerantany. hampiasa, handika, hanatanteraka, hampiseho ary hizara izany vaovao sy atiny izany ary hanomanana asa vita avy amin'ny, na hampidirina amina sanganasa hafa, fampahalalana sy atiny toy izany, ary hanome sy hanome alalana ireo zana-dàlana voalaza etsy aloha.
Fampahalalana natolotry ny mpikambana.
Afa-tsy izay voalaza eo ambanin'ny "FANAMBARANA NY OLOMBELONTSIKA" etsy ambany, dia hotazomin'ny SGS tsiambaratelo ny fampahalalana nomenao anao amin'ny SGS, ao anatin'izany ny laharan'ny carte de crédit, ary hampiasa na hampiharihary izany fampahalalana izany fotsiny ho an'ny antony nanangonana izany vaovao izany, na araky ny lalàna.
Mba hamahana ny fitoriana momba ny serivisy SGS dia tokony hifandray aloha ianao Mpanohana ny SGSt amin'ny support@sovereigngracesingles.com.
SOVEREIGNGRACESINGLES.COM MANOMBOHITRA NY SERVICE SOVEREIGNGRACESINGLES.COM AMIN'NY ASA "AS" IANAO ARY TSY MISY FANANTENANA MISY Karazan-java-miseho, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, AMIN'NY ORINASA MISY ORINASA. SOVEREIGNGRACESINGLES.COM MAZAVA FA TSY MISY FANAMPINY NY FAMERENANA NY FAHAMARINANA, FITNESS HAHAZOANA TANJONA MAHASOA, NA TSY FANAMARIHANA. Ny SGS dia tsy manome antoka ny hampiasanao ny serivisinao SGS ho azo antoka, tsy hisy fanelingelenana, misy foana, na tsy misy hadisoana, na hihaona amin'ny zavatra takinao, na koa izay lesoka rehetra amin'ny Serivisy dia ahitsy. SOVEREIGNGRACESINGLES.COM dia TSY MANAO NY FAHATONDRANA AZY, ARY TSY MISY FOMBA AZY ATAO AMIN'NY FANAJANA NY, SERVICE TELEPHONE, INDRINDRA NY FITSIPIKA, LALANA NA FANAHINANANA AMIN'NY SERVICE TELEPHONE.
FAMERENANA NY FAHAMARINANA.
TSY MISY ATAON'NY SOVEREIGNGRACESINGLES.COM AZO AZO ATAO (I) AMIN'IZAO ROA AMIN'NY FAHAMARINANA TSY MISY, INDRINDRA, SA TSY MISY VOAFETRA, FANAPOTANA NY FAMONJENA DATA, FAMONJENA PROGRAMA ) FITSABOANA AMIN'NY FOMBA FANAMPIANA AZY NA TSY FAHASALAMANA Hampiasa ny SERVICE SOVEREIGNGRACESINGLES.COM, NA RAHA SOVEREIGNGRACESINGLES.COM NA NY AENTANY NA NY MPITSIDATRA AZON'IZANY dia efa nanoro hevitra momba ny mety ho an'ny olona mitovy amin'izany. TSY MISY INDRINDRA NY ZAVATRA Mifanohitra AMIN'IZAO, NY FITANDREMANA AMIN'NY COM ANAO AMIN'NY TOKONY REHETRA IZAO, ARY TSY MISY LOHA HEVITRA AMIN'NY ASA, dia omena anao isaky ny vola. Serivisy mandritra ny fe-potoana maha-mpikambana. Ankoatr'izay, ny SOVEREIGNGRACESINGLES.COM dia milaza ny tsy fananana andraikitra rehetra, na inona na inona endrik'asa, ho an'ny asa na fisamborana mpikambana hafa na mpampiasa (tafiditra ao anatin'ireo mpampiasa tsy fantatra, na "mpijirika") an'ny SERVIE.
FIANGONAN'NY VARIATIONS an'ny fanjakana.
Ity fifanarahana ity dia natao tao amin'ny State of Washington, Etazonia. Manaiky ianao fa ny lalàn'i Etazonia (na inona na inona fifanolanana amin'ny fitsipiky ny lalàna) dia hitantana ity fifanarahana ity ary izay fifanolanana rehetra mipoitra na mifandraika amin'ity fifanarahana ity dia iharan'ny fitsarana federaly sy fanjakana any amin'ny fanjakan'i Washington. , USA. Ity fifanarahana ity, ekena rehefa misoratra anarana amin'ny serivisy SGS, dia misy ny fifanarahana iray manontolo eo aminao sy i SGS momba ny fampiasana ny serivisy. Ity fifanarahana ity dia azo ovaina amin'ny fampandrenesan'ny SGS aminao fotsiny, na amin'ny alàlan'ny fanoratana nataonao sy tompon'andraikitra ofisialin'ny SGS Raha tsy voalaza mazava tsara, dia hijanona eo amin'ny famaranana ny maha-mpikambana anao ao amin'ny serivisy ireo fepetra. Raha misy fehin-kevitra momba ity fifanarahana ity izay tsy mandeha amin'ny laoniny, ny sisa amin'ity fifanarahana ity dia hitohy amin'ny heriny sy amin'ny fomba feno.
FANAMBARANA NY FIVORIAMBentsika
Ny SGS dia manolo-tena amin'ny famoronana tontolo azo antoka sy azo antoka amin'ny Internet izay ahafahan'ny mpikambana mifandray sy milamina amin'ny mpikambana hafa. SGS dia manangona ny mombamomba anao manokana avy amin'ireo mpikambana ao aminay mba hanomezana faktiora marina sy mety, mifanentana mifanaraka aminy ary serivisy ho an'ny mpanjifa mahaliana. Izahay dia tsy hizara ny mombamomba ny faktioranao amin'ny olona ivelan'ny orinasa misy anay. Izahay dia tsy hizara fampahalalana fanampiny fanampiny amin'ny olona ivelan'ny orinasa sy / na ireo mpiara-miasa aminay ara-barotra matoky, afa-tsy izay voalaza ao amin'ity fifanarahana ity. Ny mpanjifa dia mety manova ny mombamomba azy amin'ny alàlan'ny pejy "Edit Profile".
Azonao atao ny miditra sy mampiasa endri-javatra sasany amin'ny Serivisy amin'ny alàlan'ny fitaovana finday sasany, (ny "Serivisy finday"). Ny fidiranao sy ny fampiasanao ny Serivisy finday dia iharan'ny fepetra sy fifanekena amin'ity fifanarahana ity, ao anatin'izany ny tsy ferana ny fepetra sy fepetra momba ny fampiasana sy ny fandefasana ny atin'ny mpampiasa, ary koa ny fepetra fanampiny natolotra anao amin'ny fanekenao rehefa manasonia ianao hampiasa ny Serivisy finday.
Mariho tsara fa amin'ny alàlan'ny fidirana na fampiasana ny Serivisy finday dia mbola mihatra ny tahan-dalàna sy sarany mahazatra an'ny mpitondranao, toy ny tahan'ny hafatra sy data mahazatra, ary tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ireo sarany ireo ianao.
Fampiharana azo sintomina
Amin'ny alàlan'ny fampiasana rindranasa azo sintomina ahafahana mampiasa ny serivisy dia manamarina mazava tsara ianao fa ekenao ny fepetra sy ny fepetra momba ny fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany, na fifanarahana mitovy amin'izany, mifandraika amin'ny fampiharana atolotra amin'ny fisintomana na fametrahana, na mety havaozina indraindray.
Rindrambaiko finday avy amin'ny iTunes na ny App Store. Ity manaraka ity dia mihatra amin'ny rindranasa finday azonao na alainao avy amin'ny iTunes Store na ny App Store nomen'ny Apple ("iTunes-Sourced Software"): Manaiky ianao ary manaiky fa io fifanarahana io dia eo anelanelanao sy SGS ihany, fa tsy Apple, ary izay Apple dia tsy tompon'andraikitra amin'ny iTunes-Sourced Software na ny atiny. Ny fampiasanao ny lozisialy iTunes-Sourced dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny App Store Terms of Service. Ekenao fa tsy manana adidy na inona na inona i Apple hanome ny fikojakojana sy serivisy fanampiana ho an'ny iTunes-Sourced Software. Raha misy tsy fahombiazan'ny lozisialy iTunes-Sourced hanaraka izay fiantohana azo ampiharina dia azonao atao ny mampandre an'i Apple, ary haverin'i Apple aminao ny vidin'ny fividianana rindrambaiko iTunes-Sourced; araka izay azon'ny lalàna ampiharina indrindra, Apple dia tsy hanana adidy fiantohana hafa na inona na inona mikasika ny iTunes-Sourced Software, sy izay mety ho fatiantoka, fatiantoka, trosa, fahasimbana, vidiny na fandaniana azo avy amin'ny tsy fetezana mifanaraka amin'ny fiantohana rehetra. hofehezin'ity fifanarahana ity irery sy izay lalàna mihatra amin'ny SGS ho mpamatsy ny lozisialy. Manaiky ianao fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fiatrehana ny fangatahana ataonao na antoko fahatelo mifandraika amin'ny lozisialy iTunes-Sourced na fanananao sy / na fampiasanao ny lozisialy iTunes-Sourced i Apple, ao anatin'izany ny, fa tsy ferana amin'ny: (i) tompon'andraikitra amin'ny vokatra fitakiana; (ii) misy milaza fa tsy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna na lalàna mifehy izay ampiharina ny lozisialy iTunes-Sourced; sy (iii) fanambarana mipoitra eo ambany fiarovana ny mpanjifa na lalàna mitovy aminy; ary izany fanambarana rehetra izany dia fehezin'ny fifanarahana ity sy izay lalàna mihatra amin'ny SGS amin'ny maha mpamatsy ny lozisialy azy ireo. Manaiky ianao fa, raha misy ny antoko fahatelo milaza fa ny iTunes-Sourced Software na ny fanananao sy ny fampiasanao an'io iTunes-Sourced Software io dia manitsakitsaka ny zon'ny fananana ara-tsaina avy amin'ny antoko fahatelo, SGS, fa tsy Apple, dia tompon'andraikitra amin'ny famotopotorana fotsiny. fiarovana, fametrahana ary famoahana ny fangatahana fanitsakitsahana ny fananana ara-tsaina toy izany araka izay takian'ity fifanarahana ity. Ianao sy ny SGS dia manaiky sy manaiky fa Apple, sy ny zanani-Apple dia mpandray tombony amin'ny fifanarahana fahatelo mifandraika amin'ny fahazoan-dàlan'ny lozisialy iTunes-Sourced, ary, rehefa ekenao ny fe-potoana sy fifanarahana amin'ity fifanarahana ity dia hanana ny Apple ny zony (ary heverina ho nanaiky ny zony) hampihatra ity fifanarahana ity mifandraika amin'ny fahazoan-dàlan'ny lozisialy iTunes-Sourced manohitra anao amin'ny maha-beneficiary anao ny antoko fahatelo. Tsy voafetra ny fe-potoana hafa amin'ity fifanarahana ity, dia tsy maintsy manaraka ny fehezan-kevitry ny antoko fahatelo izay mihatra rehefa mampiasa iTunes-Sourced Software.
Rindrambaiko finday avy amin'ny Google Play Store. Ity manaraka ity dia mihatra amin'ny rindranasa finday azonao amin'ny Google Play Store ("Rindrambaiko Google-Sourced"): (i) ekenao fa eo aminao sy SGS ihany no misy ny fifanarahana fa tsy amin'i Google, Inc. ("Google") ; (ii) ny fampiasanao ny lozisialy Google-Sourced dia tokony hanaraka ny fehezan-dalàna momba ny serivisy Google Play Store an'i Google ankehitriny; (iii) Google dia mpamatsy ny Google Play Store izay nahazoanao ny Google-Sourced Software; (iv) SGS, fa tsy Google, dia tompon'andraikitra amin'ny rindrambaiko Google-Sourced irery ihany; (v) Google dia tsy manana adidy na andraikitra aminao momba ny lozisialy Google-Sourced na ny fifanarahana; ary (vi) ekenao ary ekenao fa Google dia mpandray tombony amin'ny fifanarahana satria mifandray amin'ny lozisialy Google-Sourced an'ny SGS.
Tsy misy fanohanana. Ity fifanarahana ity dia tsy manome alalana anao handray avy amin'ny SGS, ireo manana fahazoan-dàlana na Apple azy, izay antontan-taratasy fampiasa, fanohanana, fanampiana an-tariby, fikojakojana, na fanatsarana ny rindranasa finday.
Fampahalalana nangonina tato amin'ity tranonkala ity.
Manangona loharanom-baovao vitsivitsy momba anao ny mpampiantrano anay rehefa mangataka pejy amin'ny mpizara anay ianao, ao anatin'izany ny adiresy IP anao. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana cookie eo amin'ny harddrive anao. Ny cookie dia lohateny HTTP fotsiny izay misy fampahalalana an-tsoratra, toy ny domain, ny lalana ary ny variables hafa napetrak'ilay tranonkala. Ny adiresy IP anao dia isa iray ampiasain'ny solosaina amin'ny tamba-jotra hahafantarana ny solosainao mba hahafahan'ny data (toy ireo pejin-tranonkala angatahinao) halefa aminao. Ny solosainay dia mampiasa adiresy IP sy cookies mba hanangonana vaovao marobe momba ny demografika momba ireo mpampiasa amin'ny faritra iray. Ity fampahalalana ity dia tsy misy na inona na inona afaka mamantatra anao manokana.
Mifandray amin'ny tranokala.
Raha manana fanontaniana momba an'ity fanambarana momba ny tsiambaratelo ity ianao na ny fanaon'ity tranonkala ity dia mifandraisa azafady:
PO Box 355 Toledo, WA 98591 Etazonia
Azafady azafady fa tsy afaka misoratra anarana amin'ny SGS ianao raha tsy manaiky an'ity fifanarahana ity.